काठमाडौं। प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा भएपछि सर्वेन्द्र खनालले संगठनमा लामो समयदेखि सुविधा सम्पन्न र लाभ हुने ठाउँमा बस्दै आएका प्रहरी जवानदेखि अधिकृतहरूको नामावली संकलन कार्यलाई तीव्र बनाएका छन् ...
नवलपरासी । पछिल्लो समय नेपालबाट वैदेशिक रोजगारका लागि विशेष गरी खाडीमुलुक जाने हजारौँ युुवा समस्यामा पर्ने गरेका छन् । विगत चार वर्षयता पूर्वी नवलपरासीका ६०० र पश्चिम नवलपरासीमा ९४६ जना विभिन्न ...
बिप्लबले गरे डरलाग्दो काम, वेश क्याम्प नै राखेर सैन्य तालिम
काठमाडौं। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले वेश क्याम्प नै राखेर सैन्य तालिम लिएको नेपाल प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालीकामा बेसक्याम्प स्थापन गरी पूर्वी कमाण ...
पुर्व अाईजीपीले पुर्वाग्रह साँधेका डिएसपीको अपराध महाशाखामा सरुवा
काठमाडौं । पुर्व अाईजीपी प्रकाश अर्यालले पुर्वाग्रह साँधेर एक बर्षमा १० भन्दा बढी ठाउँमा सरुवा गरेका डिएसपी रुगम कुँवरको अपराध महाशाखामा काज सरुवा भएको छ । प्रहरी प्रधान का ...
दुर्घटनास्थलबाट हटाइयो मालिन्दो एयरको विमान,अन्तर्राष्ट्रिय उडान-अवतरण सुरु
काठमाडौँ । धावनमार्गभन्दा बाहिर चिप्लिएर घाँसे मैदानमा पुगेको मालिन्दो एयरको विमानलाई मैदानबाहिर तानेर अहिले त्रिभुवन बिमान स्थललाई सुचारु गरिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ उ ...
प्रहरीको चुस्ता र ठूलाे मात्रामा हातहतियार सहित मोक्तान पक्राउ
मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले ठूलो मात्रामा हात हतियार र गोली गठ्ठा सहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । आज विहान हेटौडा उपमहानगरपालिका–३ स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्गको लेबट भन्ने स्थानमा प्रहरीले अनिल ...
काठमाडौं । सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी )मा बढुवा भएसँगै नेपाल प्रहरीमा रोकिंदै आएको जवानदेखि एआईजीसम्मको बढुवा प्रक्रिया सुरु हुन लागेको छ । सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै ...
एसएसपी सिंहले अपराध महाशाखाको कमाण्ड सम्हाले
२०७५ बैशाख ५ गते
काठमाडौं । संगठित अपराध नियन्त्रणमा दक्ष मानिने एसएसपी धिरजप्रताप सिंहले महानगरीय अपराध महाशाखाको कमाण्ड सम्हालेका छन् । महाशाखा प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनी ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या काण्डमा ...
काठमाडौं । अवैध नेटवर्किङ व्यबसायको धन्दा गरेर ठगी गर्ने गिरोह प्रहरीको फन्दामा परेको छ। ठगीमा संलग्न ७ जनालाई केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको हो । सीआईबीले आईबोस ग्लोबल मार् ...
सोल्टीको माजोङ क्यासिनोमा छापा ,८ नेपाली पक्राउ
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट खटिएको टोलीले होटल सोल्टीको क्यासिनो माजोङमा छापा मारेको छ। प्रहरीले मंगलबार राति नेपालीहरु क्यासिनोमा रहेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरी माजोङमा छाप ...
यातायातमा रहेको सिन्डिकेट तोड्न कडाइ गर्दै सरकार
काठमाडौं ।२५ बर्षदेखी सिन्डिकेट गरेर यातायात सञ्चालन गर्दै आइरहेको समुह अन्तत: फन्दामा पर्ने भएको छ। उनीहरुले हड्तालमा उत्रने घोषणा गरेपछि यातायात व्यवसायीका गाडी खोसेर सरकारले चलाउने तयारी गरे ...
अपराध महाशाखामा प्रमुखमा एसएसपी सिंह
काठमाडौं । महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख दिवेस लोहनी ३३ किलो सुन काण्डमा विवादमा परेर हेडक्वार्टर तानिएपछि उनको स्थानमा एसएसपी धिरजप्रताप सिंहको सरुवा भएको छ। संघीय प्रहरी इकाई बाग्मतीमा कार्यरत सिं ...
रिसको झोकमा युवतीको हत्या गर्ने तामाङ पक्राउ
काठमाडौं । गएराती बसुन्धारामा युवतीको हत्या गर्ने विजय तामाङ पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले तामाङलाई हत्या भएको २४ घन्टा नबित्दै पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका तामाङले ढुंगा प्रहार गरेर हत्या गरेको स्वीक ...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वटै तहमा सरकार गठन भइसकेकाले जनताको चाहना अनुसार विकास र समृद्धिको यात्रामा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतले वीरेन्द ...
सुराकीको नाममा सबैभन्दा बढि रकम खर्च गर्नेमा राअ प्रमुख, एक वर्षमै दुई करोड बढि खर्च
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा गृह मन्त्रालयले सुराकी खर्च भन्दै २ करोड १७ लाख खर्च गरेको छ । २२ वर्षअघिको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा गृहमन्त्री, गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्ध ...
फरार मनाङेले सेटिङ गरी पाए सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा उन्मुक्ति
२०७४ चैत्र ३० गते
काठमाडौं । गुण्डा नाइके दीपक मनाङ्गेले रहस्यमाय तरिकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा उन्मुक्ति पाएका छन् । मनाङ्गेले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । सरकारी वकिलको कार्यालयले लापरवाही गर्दा मनाङ् ...
३३ किलो सुनकाण्डका अभियुक्तले गरे प्रहरी हिरासतमा आत्महत्या
काठमाडौं । ३३ किलो सुनकाण्डका एक अभियुक्तको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको छ । महानगरीय प्रहरी बृत सिंहदरवारमा बर्दिया राजपुर नगरपालिका प्रयागपुर घर भई हाल काठमाडौंको चुच्चेपाटी बस्दै आएका प्रेमला ...
दुबै आईजीपीले सम्हाले कार्यभार , वृत्ति विकासमा ध्यान दिन गृह सचिवको सुझाव
काठमाडौं। नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरीका महानिरिक्षक सैलेन्द्र खनालले आजबाट आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन्। गृह मन्त्रालयमा बिहीबार बिहान आयोजित बिशेष समारोहम ...
एक्सनमा उत्रियो प्रहरी , ठुलो मात्रामा अबैध भारतीय रुपैयाँ बरामद
काठमाडौँ। प्रहरीले ठुलो मात्रामा अबैध भारतीय रुपैयाँ बरामद गरेको छ। ४९ लाख भारुसहित लाजिम्पाटमा २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी पसिरबाट गएको टोलीले मोरङको कटहरी गाउँपालिका ३ क ...
दलाई लामाका प्रतिनिधिलाई कसको संरक्षण ?
काठमाडौं । वाम गठबन्धनलाई विश्वास गरेर सहयोग गर्दै आएको चीन एकाएक भड्किएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पछिल्ला गतिविधिबाट चीन सशंकित बन्न पुगेको हो । भण्डारी र ...
अाईजीपी खनाललाई बधाई दिंदै खरेलद्वारा फेसबुकमार्फत राजिनामाको घोषणा
काठमाडौं। प्रहरी महानिरीक्षक (अाईजिपि) नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाँउदै डिआईजी रमेश खरेलले बुधबार राजिनामा दिने घोषणा गरेका छन् । उनले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा पोस्ट गर्दै भनेका छन् - 'न ...
सचिव न्यौपानेद्वारा अख्तियारमा पदबहाली
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएका सचिव महेश्वर न्यौपानेले सोमवार पद बहाली गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिवमा रहेका न्यौपाने चैत २० गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय ब ...
ओली एकलौटी रुपमा चलेको भन्दै माओवादीको असन्तुष्टि
काठमाडौं । भारत भ्रमणसँगै चौतर्फी रुपमा चर्चा कमाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले भने असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ए ...
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतमा पीएचडीको उपाधि
काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आइतबार मानार्थ पीएचडीको उपाधि प्रदान गरिएको छ । भारतको उत्तराखण्ड राज्यस्थित उद्यमसिंह नगरमा रहेको गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक ...
वर्षाका कारण डीपीएलको पहिलो खेल रद्द, १–१ अंक बाँडे
धनगढी । रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेट अन्तर्गत आजको पहिलो खेल रद्द भएको छ । आज महेन्द्रनगर युनाइटेड र काठमाडौं गोल्डेन्सबीचको पहिलो खेल तालिका थियो । तर वर्षाका कारण उक्त रद्द भएको छ। खे ...
एउटै मन्त्रालयमा तीन जना सचिव, ३० जनाको सरुवा, गृहमा प्रेमकुमार राई
काठमाडौं । सरकारले एकै दिन ३० जना सचिवको सरुवा गरेको छ। सरुवा भएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका प्रेमकुमार राई गृहमा आएका छन् । यताm अर्थ मन्त्रालयमा सचिवमा राजन खनाल आएका छन्। खनाल अख्तियार दुरुप ...
प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच एकान्त वार्ता हुने
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच आज एकान्त वार्ता हुने भएको छ । भारतीय समय अनुसार साँझ ६ः३० बजे प्रधानमन्त्री निवास ७ लोककल्याण मार्गमा उनीहरुबीच भे ...
रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा गरिएको करोडौ लगानी स्वाहा
काठमाडौं । सरकारले समयमै सही निर्णय लिन नसक्दा बालगोपालेश्वर मन्दिरसहित रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा लगानी भएको साढे ३ करोडभन्दा बढी रकम खेर जाने भएको छ। मौलिक सम्पदाको स्वरूप बिग्रने गरी बनेका स ...
३३ केजी सुन काण्डमा हेडक्वार्टर तानिए अपराध महाशाखाका एसएसपी लोहनी
काठमाडौं । ३३ केजी सुन काण्डका भरिया सनम शाक्य हत्या र सुन गायव प्रकरणमा महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी दिवेश लोहनीको संलग्नता भेटिएपछि उनलाई कारबाही स्वरुप हेडक्वार्टर तानिएको छ । गृह मन्त्रालयद्वार ...
एयरपोर्ट भित्रका अवैध गतिविधिमा मन्त्रीका आँखा पुग्लान ?
काठमाडौं । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रका विकृतिलाई हटाउन पहल थाल्ने बताइरहँदा एयरपोर्ट भित्र भने एउटा गिरोहले अड्डा जमाएर बसेको ...
जथाभावी शुल्क नलिन निजी बिद्यालय सञ्चालकहरुलाई शिक्षा मन्त्रीको चेतावनी
काठमाण्डौं । शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधी मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जथाभावी शुल्क नलिन निजी बिद्यालय सञ्चालकहरुलाई चेतावनी दिएका छन् । निजी तथा आवसीय बिद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल केन्द्रीय ...
बाबुरामले गरे उदाहरणिय काम, सबै सरकारी सुबिधा परित्याग
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले व्यक्तिगत सुरक्षा बाहेकका सबै सरकारी सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन् । डा.भट्टराईका सहयोगी विश्वदीप पाण ...
काठमाडौ । ३३ केजी सुन काण्डमा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले महानगरीय अपराध महाशाखाका दिवेश लोहनीसँग बयान लिएको छ। कार्यक्षेत्र नाघ्दै धरान र बिराटनगर पुगेर अपर ...
सपथ चाहिं जुन भाषामा पनि लिन पाइने, अनि बाबु छोराले चाहिं आफ्नो मातृ भाषामा कुरा गर्न नपाउने ?
कुमार भण्डारी २०७४ चैत्र २० गते
टिप्पणी काठमाडौं । नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय भाषा, राष्ट्रिय पोशाक, राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रय रङ, राष्ट्रिय झण्डाको आकार र रङ, राष्ट्रिय चरालगायत सम्पूर्ण विषय उल्लेख भएका छन् । र पनि, त्यसको कार्या ...
भतपुर महानगरले धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । फाउण्डेसनले क्रिकेट मैदानका लागि जग्गा खोजी गरिरहेकाबेला महानगर प्रम ...
माइन्यूट हराएको भन्ने विषयमा थपाको कडा प्रतिक्रिया
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सबैले एक दिन मर्नुपर्ने भन्दै झुट नबोल्न आग्रह गरेका छन् । भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख दिने कुनै निर्णय नभएको भन्ने समाचारहरु आइरहेका बे ...
का‌ंग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री खड्काको आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार
काठमाडौं । नेपाली का‌ंग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ । खड्कालाई सशस्त्र प्रहरीको टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो । खड्का पूर्वगृ ...
विप्लबलाई च्याँखे थाप्ने काम बन्द गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दिए चेतावनी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लब नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई माओवादीको खाल उठिसकेको भन्दै फेरी च्याँखे थाप्ने काम बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बिप्लब ...
गुप्तचर बिभाग अझै गृह मन्त्रालय मातहत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत लगिएको भनिएको गुप्तचर संगठन (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग)ले अझै गृह मन्त्रालय मातहत नै काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उ ...
चक्रेका ‘राइट ह्याण्ड’ आशिष पक्राउ
काठमाडौं । गुण्डा नाइके मिलन चक्रेका मुख्य सहयोगी ‘राइट ह्याण्ड’ आशिष गुरुङ पक्राउ परेका छन् । उनलाई काठमाडौं प्रहरी परिसरले महाराजगञ्जबाट पक्राउ गरेको हो । एक महिलासँग वाउन्स चेक भएको ८ ल ...
यातायात कार्यालयमा पैसाको चलखेल गर्ने बिचौलियाहरु प्रहरी फन्दामा
काठमाडौं । प्रहरीले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुँदै आएको बिचौलियाहरुको चलखेल रोक्न कडाइ गरेको छ । बागमती मोटरसाईकल शाखा सतुंगलबाट प्रहरीले ९ जना बिचौलियालाई पक्राउ गरेको हो । बिचौलीयाको समुहले रकम ...